Sabai Sabai Estate No.1 - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguSouksangkhom
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uSouksangkhom iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le ndawo yodwa yahlaziywa ngokupheleleyo ngonyaka ka-2020 ukuze ibeke esichengeni inkulungwane entsha yokuphila ngombono wokugqitywa kwekoloneli yaseFransi.
Ineplani yomgangatho ovulekileyo we-2nd enendawo enkulu eyaneleyo efanelekileyo usapho olunabantwana abancinci lubonelele ngebhedi yosuku olongezelelweyo kunye ne-cott yomntwana ziyafumaneka xa uceliwe. Iindwendwe zethu ziyakonwabela iimbono zokutshona kwelanga kwi-balcony eqinile kwaye iphathe ngetyhubhu evulekileyo eshushu ukunika zonke iindwendwe zethu into ekhethekileyo esinqwenela ukunibonelela ngayo nonke.
Umbono kukubonelela ngeyona ndawo itofotofo kwaye uphumle umoya kuzo zonke iindwendwe zethu ukonwabela indlela yokuphila yendawo.
Ifakwe kwindawo ephambili ye-icon ye-icon ye-Luang Prabang, umgama nje ohambahambayo ukuya kwezona ndawo zinomtsalane zenkcubeko i-Wat Xieng Thong, iZiko loMlamli, iCentral Park, ukufikelela ngokulula kwiivenkile zasezitalatweni, iindawo zokutyela kunye necafe ekufutshane nepropathi yethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Souksangkhom
Iyure ye-24, ifowuni ye-Smart enekhadi le-SIM lendawo kunye ne-intanethi ibonelelwa kwiindwendwe zokungena kwi-keyless lock door. Ugcino lwezindlu oluKhethekileyo, uThutho luyafumaneka ngokuxhomekeke ekufumanekeni kunye nentlawulo yenkonzo.